विचार/ब्लग Archives - Page3of 25 - Bishwo Sandesh - Bishwo Sandesh
एनआरएनए डेनमार्कको सदस्य किन बन्ने ?
रविन्द्र खड्का, अध्यक्ष –गैर आवासीय नेपाली संघ डेनमार्क सन् २००३ मा उपेन्द्र महतोको नेतृत्वमा रसियाबाट गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए ) स्थापना भयो । एनआरएनए स्थापना भएसँगै विभिन्न देशहरुमा विस्तार हुन थाल्यो । सबैभन्दा पहिला बेलायतबाट सन् २००३ मा पहिलो राष्ट्रिय समन्वय परिषद् ९एनसिसी० स्थापना गरियो । विभिन्न एनसिसीहरु विस्तार हुने क्रम जारी रह्यो । […]
महामारीकाे कसीमा नेपालीत्व
डा. बद्री केसी नेपालीत्वले हामीलाई संसारको जुनसुकै कुनामा जन्मिए पनि नेपाली नै बनाइराखेको छ । यो नेपालीत्वको वास्तविक परीक्षण सुखभन्दा दुःखमा, अझ संकटमा हुने रहेछ । अहिले दोस्रो–तेस्रो लहर चलिरहेको र अनिश्चित भविष्यबीच कोरोना वैश्विक महामारीको अनुभवले एउटा निकै भावुक र महँगो अनुभूति स्थापित गरेको छ, संकटमा परीक्षित नेपालीत्वका सन्दर्भमा । विश्वभर छरिएका नेपाली दाजुभाइ, […]
स्मृतिमा पशुपति दाइ !
पार्वत गुरुङ भनिन्छ– मुत्यु दुईप्रकारका हुन्छन् । पहाडभन्दा गह्रुँगो र प्वाँखभन्दा हलुङ्गो । सिङ्गो जीवन नेपाली वाम आन्दोलनप्रति समर्पित गर्नुभएका पशुपति चौलागाईको महाप्रस्थान साँच्चिकै पहाडभन्दा गह्रुँगो साबित भयो । उहाँको अवसानबाट हजारौँजन शोकमग्न बने । फेसबुक, ट्वीटरलगायतका सामाजिक सञ्जाल सम्मान र श्रद्धाका शब्दले रङ्गिए । मिडियामा शोक–सन्तप्त समाचार छाए । दोलखालीमात्रै हैन, उहाँ नेपाली राजनीतिको […]
कम्युनिष्टहरुले आफ्नो वास्तविक चरित्र देखाएरै छाडे : शंकर भण्डारी
शंकर भण्डारी- केन्द्रीय सदस्य एवं संयोजक तरुण विभाग,नेपाली कांग्रेस “कम्युनिष्टलाई विश्वास गर्दा, दोश्रो जनआन्दोलको जनादेशभन्दा बाहिर गएर निर्णय लिंदा, मुलुकको मौलिक संस्कृति, परम्परा र विशिष्टतालाई भत्काउने कार्यमा साथ दिंदा कांग्रेस कमजोर भयो लोकतन्त्रका विरोधीहरु लोकतन्त्रका पहरेदार बन्न पुगे । जति छिटो कांग्रेसले कम्युष्टिलाई बोक्न छाड्छ र हिजो गरेका गलत निर्णयहरु सच्याउने साहस गर्छ त्यति नै […]
होम आइसोलेसन र मानसिक स्वास्थ्य
डा सुप्रिया शेरचन भट्टचन बढ्दै गरेको कोभिड १९ को संक्रमणले आज देश संकटमा परेको छ। दिनहुँ हजारौँ संक्रमित बढ्नुका साथै बढ्दो मृत्युदरले सबैको मनमा डर र त्रास पसेको छ। संक्रमितमध्ये सबैभन्दा बढी बिरामीहरु अहिले होम आइसोेलेसनमा र क्वारेन्टाइनमा बसेका छन्। जटिल खालका कोरोनाको लक्षण भएका बिरामीहरुको उपचार अस्पतालको कोभिड वार्डदेखि आइसीयूमा भइरहेको छ। होम आइसोलेसनमा […]
धृतराष्ट्रका विगत र आगत
उद्धव लुइँटेल पिप्लेली संस्कृत साहित्यको चर्चित आर्ष महाकाव्य महाभारतमा एकजना महत्त्वपूर्ण पात्र छन धृतराष्ट्र । उनी द्वापरयुगको शक्तिशाली राज्य हस्तिनापुरको राजकाजमा कागताली परेर राजा बनेका थिए । प्राकृतिक रूपमा उनी आँखा देख्दैनन् । उनी राजा भएपछि विकसित भएका घटनाक्रमहरूले महाभारतको युद्ध भयो । राजा भएर पनि पुत्रमोहको अन्धताले ग्रस्त धृतराष्ट्रले हस्तिनापुरका एकसय एक महारथिहरू र […]
कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट सम्बन्धी ६ प्रश्न र उत्तर
डा संगिता राई १. नयाँ भेरियन्ट भनेको के हो ? भाइरसद्वारा आफ्नो जीनको अनुक्रमलाई परिवर्तन गर्ने प्रक्रियालाई म्युटेशन भनिन्छ। जसले गर्दा भाइरस थप सङ्क्रामक र घातक हुने वा आफैं हराएर जाने हुन्छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार भाइरसले आफ्रनो संख्या वृद्धि गर्ने क्रममा आफूमा थोरै परिवर्तन ल्याउँछ। यो परिवर्तन आउनु सामान्य मानिन्छ जसलाई म्युटेसन वा उत्परिवर्तन […]